Vavaka iraisam-pinoana ho an’ny Mahery fon’ny 1947: “Andrimanitra no miantoka ny fahafahan’ny olony” | Région Boeny
Maro ny Malagasy latsa-drà sy nanolotra ny ainy ho an’i Madagasikara ny 29 marsa 1947. Tsy navela handalo fotsiny ny fahatsiarovana io datin’andro manan-tantara ho an’i firenena io teto amin’ny Faritra Boeny. Natomboka ny Sabotsy 28 Masra 2015 ny fankalazana ka vavaka iraisam-pinoana tao amin’ny EKAR Mahabibo Saint François Xavier no nanamarihana azy.
“Andrimanitra no miantoka ny fahafahan’ny olony” izay no loha-hevitra nosafidin’ny FFKM hanamarihana izany vavaka iraisam-pinoana izany ho an’ny Mahery fon’ny 1947 izany. Fahendrena tahaka ny nananan’ny Salomona kosa no vavaka nasandratr’izy ireo ho an’ireo Mpitondran’i Madagasikara mba hisian’ny fandrosoana marina eto amin’ny firenena.
Nanome voninahitra ny fotoam-pivavahana ireo manam-boninahitra sivily sy miaramila eto Mahajanga niaraka tamin’ireo olom-pirenena tsotra sy fikambanana samihafa.
“Nisy ny rà nalatsaka ary maro ny aina nafoy nefa 68 taona aty aoriana dia mbola miaina anaty fijalina tanteraka ihany ny vahoaka Malagasy. Tsara ihany koa ny Fampihavanam-pirenena izay tarihin’ny FFKM saingy tsy ampy izany fa mitaky fiovan’ny toe-tsain’ny Malagasy tsirairay” hoy ny Lehiben’ny Distrikan’i Mahajanga I, Atoa Rasamoelina Andriariliva Doris, izay nisolo tena ny Lehiben’ny Faritra Boeny.
29 Martsa teto Mahajanga
Toy ny fanao isan-taona dia teo amin’ny Jardin Cayla Ambalavola, misy ny Tsangambaton’ny 29 Martsa 1947 ireo Bekotro maro holatra sy ny foloalin-dahy ary ny manampahefana eto an-toerana no nanao ny lanonana fahatsiarovana izay notarihin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny. Nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo maromaro taorian’ny fisafoany ny andian-tafika. Nandray anjara tamin’izany ny Ministry Harena anaty rano sy ny Jono Atoa Ahamad niaraka tamin’ny solombavambahoaka voafidy teto Mahajanga, Atoa Nicolas Stephan.
Nitohy teny amin’ny Tranoben’ny Kolontsaina Mangarivotra ny lanonam-pahatsiarovana izay niatomboka tamin’ny fijoroana vavolombelona notanterahin’Atoa Prospère Rajaobelina, akanga sisa nanamborana tamin’ireo Mahery fon’ny 1947 avy eto Mahajanga, namintina ny ady nosedrain’izy ireo tamin’izany fotoana.
Fantatra nandritra ity fotoana ity fa 12 sisa no isan’ireo Bekotro maro holatra amin’izao fotoana no mbola velona eto Mahajanga.
“Tokony ho tandrovina tahaka anaka andrimaso ny filaminam-bahoaka mba hisian’ny fampandrosoana maharitra ary tokony hatsiaro-tena ny tsirairay amin’ny fanakorontanana asehon’ny olona sasany eto amin’ny firenena fa samy tompon’andraikitra, indrindra ny amin’ny fanafihana ireny tobin’ny mpitandro filaminana ireny.” Io kosa no fanamarihana nataon’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar raha nampitaha ny fahendrena sy fitiavan-tanindrazana nanan’ireo Mahery fo 1947 sy ny fihetsika feno fihoaram-pefy misy ankehitriny asehon’ny olom-pirenena sasany izy. Notoloran’ny Lehiben’ny Faritra fanomezana kely tsirairay avy moa ireo Bekotro maro holatra 12 sisa tavela taorian’ny kabary nifandimbiasana.
Fitsidihana ireo sary pika mirakitra ny zava-niseho nandritra ny tolon’ny 1947 ny maraina, ary fandefasana horon-tsarimihetsika Ilo tsy very ny hariva samy tao amin’ny Tranoben’ny Kolontsaina no nanohizana ny fanamarihana ny 29 mars 2015 teto Mahajanga.